Izindaba - Imboni yezindwangu zezingubo zaseVietnam eminyakeni yamuva.
Ulapha: ekhaya - Izindaba -
IVietnam ingumthengisi wesibili ngobukhulu emhlabeni wezingubo nezingubo ngemuva kweChina. IVietnam idlule iBangladesh, futhi izolala isibili ezimakethe zomhlaba jikelele zokukhiqiza izembatho nezingubo engxenyeni yokuqala ka-2020.
(Ukuhlelwa kweProNewsReport): - UThanh Pho Ho Chi Minh, Okthoba 2, 2020 (Issuewire.com) -Ngaphambilini, iBangladesh yayingumthengisi wezingubo wesibili ngobukhulu emhlabeni ngemuva kweChina. Ngaphezu kwalokho, uma kuqhathaniswa nanoma yiliphi elinye izwe, umthamo wokukhiqiza waseVietnam ukhule ngokushesha okukhulu. Kunezimboni ezingaphezu kuka-6 000 zezindwangu nezingubo eVietnam, kanti le mboni iqasha abantu abangaphezu kwezigidi eziyi-2.3 ezweni lonke. Cishe ama-70% alaba bakhiqizi atholakala noma eduze naseHanoi naseHo Chi Minh City.
Kusukela ngo-2016, iVietnam ithumele izingubo nezindwangu ezingaphezulu kwezigidi eziyizinkulungwane ezingama-28 zamaRandi aseMelika kanye ne-United States ne-European Union. IVietnam iyindawo yokuhweba elinganiselayo, enamanani enzalo emakethe afanelekile nokuhambisana okuphelele kwezenhlalo, futhi ingenye yezindawo eziphakeme kakhulu.
Uma ufuna abakhiqizi bezingubo nezingubo ezinhle kakhulu eVietnam, ufike endaweni efanele. Sizokunikeza umhlahlandlela wohlu lokuthola inkampani enhle kakhulu yokukhiqiza izingubo eVietnam. Qhubeka ufunda, nazi izinkampani zokukhiqiza izingubo nezingubo ezidumile zaseVietnam ezikhethwe ngokuya ngomlando wazo omude, ukukhiqizwa ezweni lonke, kanye namakhono okuthekelisa aphumelelayo. Kepha ngaphambi kokungena, ake ngikutshele ukuthi kungani kufanele uye kumkhiqizi wezingubo nezingubo waseVietnam!
Kusukela eminyakeni embalwa edlule, njengoba kusondela i-TTP nezinzuzo zezomnotho zaseVietnam ziqala ukuvela, izinkampani eziningi zamazwe amaningi zisuse izitshalo zazo zokukhiqiza zaya eVietnam. IVietnam ibilokhu ikhombisile ukukhula kancane kancane komkhakha.
Isivumelwano Se-EU-Vietnam Sokuhweba Okukhululekile (i-EVFTA) phakathi kwe-EU neVietnam siphinde sicacise ukwakhiwa kwezixhumanisi zamazwe ngamazwe phakathi kweVietnam nemakethe yomhlaba. Isivumelwano sihlinzeka ukufinyelela emakethe kwezimpahla nezinsizakalo zaseVietnam, futhi siyathembisa uma kubhekwa okuhle kwezimpilo zabasebenzi.
Isivumelwano lesi sathoma ukusebenza mhlana ali-1 kuRhoboyi, savula umnyango wokuqinisa ukukhululeka kokungeniswa nokuthunyelwa kwangaphandle okuhlanganisa i-Vietnam ne-European Union. I-EVFTA yisivumelwano esinethemba elihlinzeka cishe ngokukhanselwa kwamanani entengo angama-99% phakathi kwe-EU neVietnam.
Ngakho-ke, kungokwemvelo ukuthi izintshisekelo zezinkampani zomhlaba wonke zidlulisele eVietnam. Izinkampani ezidume kakhulu yiNike ne-Adidas. Ekugcineni, ukungezwani kwezomnotho phakathi kweJapan neChina nakho kukhuthaze kakhulu ukudluliswa kwenzalo ezinkampanini zezembatho ezifuna ukutshala imali kwingqalasizinda eJapan. Namuhla, iVietnam iyisinqumo esingcono kakhulu semifaniswano esezingeni eliphakeme, ukugqoka okusemthethweni, ukugqoka okwejwayelekile kanyeiyunifomu yezemidlalo.
Abakhiqizi eVietnam baziwa ngemikhiqizo yabo yezingubo ezisezingeni eliphakeme. Ungathola izingubo ezingabizi kakhulu, ezisezingeni eliphakeme, futhi eziguquguqukayo eHo Chi Minh City.
IVietnam isondelene neChina futhi inechungechunge lokuphakelwa okuphelele emhlabeni wonke, okuyenza izwe elifanele izembatho zamazwe omhlaba nezingubo ezingenisa kwamanye amazwe.
Ngenxa yokuncintisana, ukwehla kokukhula kwamaholo nokucindezelwa kwamandla emali eVietnam kungenye yezizathu ezibalulekile ezenza abakhiqizi bezingubo baseVietnam bakhethe kahle kakhulu.
Ngokwethiyori yenzuzo yokuqhathanisa, izwe kufanele labele izici zalo zokukhiqiza ezindaweni lapho linezimfanelo ezinkulu khona. Lapho umkhiqizo wezwe okhiqizayo ubiza kakhulu, imboni yokukhiqiza izosusa izitshalo zayo zokukhiqiza zisuke eYurophu nase-United States ziye kwamanye amazwe.
Yize iChina yayijwayele ukuheha izinkampani eziningi zokukhiqiza ezazididekile ngobuchwepheshe obuthile bokukhiqiza kanye nembuyiselo ephezulu yemali, iVietnam neMexico ziyizibonelo zamazwe amabili esesingenelele kuwo.
Kepha ngokuqubuka okungazelelwe kwe-COVID19, ukugxila okuyinhloko kwezinkampani ezikhiqizayo kugudluzela eChina elingumakhelwane, eVietnam. Ngenxa yalokhu, umkhiqizo waseVietnam ukhule kakhulu futhi weqe izinga lokukhula laseChina, ngoba izindleko zabasebenzi eChina zikhuphuke ngokushesha kunezinga lokukhula kwempahla.
I-Thai Son SP Factory Sewing Factory ingumkhiqizi odumile futhi ohola phambili eVietnam; ingomunye wabakhiqizi abaphezulu bezinkampani zokuthunga nezokugqoka lapho. Itholakala eHo Chi Minh City, eVietnam.
Amakhasimende adonswa yinkampani yabo ngenxa yenani elikhulu lezingubo ezenziwe ngezindwangu eziyindilinga eziyindilinga. Le nkampani yasungulwa ngo-1985 futhi yibhizinisi lomndeni. Umqondisi njengamanje wenkampani uMnu Thai van, Thanh.
Cishe abasebenzi abayinkulungwane nemishini ebalelwa ku-1 203 bayingxenye yenkampani. IThai Son Sewing Factory inezimboni ezimbili eHo Chi Minh City futhi ikhiqiza cishe izikibha ezingama-250,000 njalo ngenyanga.
I-Thai Son Sewing Factory inebanga elibanzi eVietnam, ikhiqiza imidwebo eyahlukahlukene yezingubo zabesifazane, zezingane nezamadoda. Izingubo zabo zifaka yonke into kusuka kwezemidlalo kuye ezingutsheni. Eminye yeminye imisebenzi abayinikezayo imi ngokulandelayo:
I-Thai Son Sewing Factory inikezela abathengi ngezindlela ezahlukahlukene zokuklama, kufaka phakathi ukugqoka kwezingane, okokugqoka kwabesilisa nokugqoka kwabesifazane. I-Thai Son Sewing Factory nayo inezitifiketi eziningi ezithembekile neziyiqiniso, kufaka phakathi i-BSCL, i-SA 8000, kanye nesitifiketi esikhulu sokuthola izimiso zokuhle kusuka ku-Target, elinye lamakhasimende ayo ase-Australia.
Amakhasimende eThai Son Sewing Factory eYurophu afaka izinqolobane, i-oasis nomkhuhlane. Amakhasimende e-Thai Son e-Australia afaka i-OCC noMnu Simple. I-Thai Son ibambisana noMaxstudio eLos Angeles.
UDony unenye inkampani ehamba phambili eVietnam. Banikela ngezinhlobonhlobo zezingubo nezembatho ezinhlobonhlobo zemiklamo nezitayela. Bakhiqiza izingubo nezingubo zabesilisa, abesifazane nezingane. Imikhiqizo yabo kulula ukuyithumela emhlabeni jikelele, futhi izinsizakalo zabo zingabonakala yonke indawo.
Izingubo zabo zifaka izingubo zomsebenzi, iyunifomu, ukugqoka okusemthethweni kwebhizinisi, nezinto zokuzivikela ezinjengamaski wokulwa namagciwane futhi aphephile aphinde asebenze nezingubo zokuvikela ezokwelapha.
Le nkampani itholakala eHo Chi Minh City, eVietnam. UDuny ungumnikazi wezimboni ezintathu zokuthunga, zokuphrinta nezokuhlobisa.
Le nkampani ikhiqiza cishe imikhiqizo eyi-100.000-250.000 yekhwalithi ephezulu njalo ngenyanga. Ikhwalithi engcono kakhulu ye-DONY ukuthi ithembisa ukuhlinzeka amakhasimende ngezinto ezisezingeni eliphakeme kakhulu ngesikhathi esihleliwe. Izinsizakalo zabo zifaka:
UDONY ungomunye wabakhiqizi bezingubo ezifuywayo nabahlelekile eVietnam; IDONY inezinhlobonhlobo zamakhasimende, kufaka phakathi izitolo zomhlaba wonke zezimfashini / zezingubo zokusebenza nezinkampani ezidinga umfaniswano.
I-DONY inikeza izinsizakalo ze-B2B emhlabeni jikelele. Balandela izinqubomgomo zenkampani ezilungile futhi banezitifiketi zangempela zokubhaliswa kwe-FDA, CE, TUV ne-ISO. Amakhasimende abo aphesheya ahlanganisa amazwe ase-Asia afana ne-United States, i-Europe, i-Australia ne-Japan.
Impendulo: Singakunikeza amasampuli wokuhlolwa kwakho ngaphambi kokufaka i-oda lenqwaba. Imali eyisampula ngu-US $ 100, ezobuyiselwa ngokushesha uma usufake i-oda elikhulu. Isampula nje ukukwazisa ikhwalithi nobuciko bethu.
Impendulo: Yebo, ungahlanganisa izitayela eziningi ukuhlangabezana ne-MOQ yezindwangu. Sizimisele ukuqala ngenombolo encane yama-oda wokuhlola. Siyavumelana nezimo mayelana nobuningi be-oda elincane ngoba siyaqonda ukuthi i-MOQ incike kuzidingo zakho zomjikelezo wokuthenga.
Impendulo: Singahlinzeka ngezingubo ezifana nezikibha, amahembe, amahembe wepolo, izingubo zomsebenzi, amalokwe, izigqoko, amajakhethi, amabhulukwe, amaski nezingubo zokuzivikela. Sikulungele ukuphrinta nokuhlobisa amalogo amakhasimende.
A: Yebo, sineqembu elinamandla kakhulu nelinolwazi lobuchwepheshe nentuthuko. Bangaqala ngezithombe noma ngemibono bese beyiguqula ibe yimikhiqizo eqediwe. Bangasebenza ngokuzimela, bephakamisa ukwakheka, izinto ezidingekayo, izesekeli, nokusebenza komkhiqizo nokubukeka.
A: Ngaphansi kwezimo ezijwayelekile, kuthatha izinsuku ezingama-3-5 ukuthola kahle imibono nezidingo zamakhasimende, nezinsuku ezingama-5-7 zokuthuthuka kwesampula. Imali yesampula yi-USD 100, ezobuyiselwa emuva kokuthi i-oda lenqwaba liqinisekisiwe
Impendulo: Kungaba ngolwandle noma emoyeni noma nge-express. Izindleko zincike emibandeleni yokulethwa okuvunyelwene ngayo, isisindo noma i-CBM nendawo oya kuyo oyifunayo.
IG & G kungenye ifektri yezingubo eyingqayizivele eVietnam, inikezela ngezinsizakalo kumakhasimende azimele nakumakhasimende asekhaya. Bethula izitayela ezintsha minyaka yonke futhi banikeze izinsizakalo e-United States naseVietnam. Le mfanelo ibenza bahluke, ngoba izinkampani eziningi eVietnam zenza izingubo ezincike ekwakhiweni komthengi. Kodwa-ke, i-G & G ibuye igxile ekukhiqizeni izingubo ezisuselwa ekwakhiweni komthengi.
Inkampani yabo yasungulwa eHo Chi Minh City e2002, futhi bebekhiqiza izinhlobo ezahlukahlukene zokugqoka kwamanye amazwe anjengeVietnam ne-United States. Eminye yemikhiqizo yabo kubalwa izingubo ezehlukene, amabhulukwe ajulukile, amajakhethi, amasudi, izikibha namahembe, izikhafu nezembatho zokuluka. I-G & G II inezitifiketi ezilandelayo: i-WRAP, i-C-TPAT, i-BSCI kanye neNdlela Yokuziphatha kaMacy.
Izembatho ezinemodi engu-9 kuyisinqumo esihle esihle somthengi kubantu abaningi eVietnam. Imodi engu-9 ithatha isikhathi esifushane ukukhiqiza okokugqoka ngoba inebanga elincanyana kunezinye izinkampani ezibalwe ngenhla, kepha mancane, ayasebenziseka kumthengi, futhi anesidingo sobuningi be-oda elincane.
Futhi bakhethekile ngezingubo zesitayela sangokwezifiso futhi banikezela ngezinsizakalo e-United States, eSingapore, e-Australia naseNew Zealand. Abasebenzi bemodi eyi-9 basatshalaliswa eminyangweni eminingi, nabasebenzi abalinganiselwa kuma-250.
Zitholakala eHo Chi Minh City futhi bezisebenza kusukela ngo-2006. Imodi eyi-9 ihlala ithembekile kumikhiqizo esezingeni eliphakeme, inenethiwekhi ebanzi, futhi inokuxhumana nosonkontileka abaningi. Emikhiqizweni yabo kubalwa izigqoko, izingubo zokugqoka, amajini, izikibha, izingubo zokubhukuda, ezemidlalo nezingubo zekhanda.
I-Thygesen Textile Company Ltd itholakala eHanoi, eVietnam, kodwa iphethwe yinkampani yaseDenmark eyasungulwa ngo-1931. Ikomkhulu layo lise-Ikast, eDenmark, liphethwe yiThygesen Textile Group.
I-Thygesen Textile Vietnam Ltd yasungulwa eVietnam ngo-2004, phambilini eyayaziwa ngeThygesen Fabrics Vietnam Company Ltd. iThygesen Textile Group nayo inezimboni e-United States, China, Mexico naseSlovakia. Imikhiqizo yabo ifaka phakathi izingubo zezingane, ezemidlalo, ezokusebenza, ezemfashini ezingajwayelekile, izingubo zangaphansi, izingubo zasesibhedlela nezingubo ezilukiwe. Izitifiketi zabo zifaka iBSCI, SA 8000, WRAP, ISO ne-OekoTex.
I-TTP Garment ingenye inkampani enikezela ngezingubo ezilukiwe nezilukiwe kubakhiqizi base-Asia nabaseNtshonalanga. I-TTP yasungulwa ngonyaka we-2008; itholakala esifundeni se-12 seHo Chi Minh City. Bakhiqiza izingcezu eziyi-110,000 ngenyanga. Banobungane nakubathengi abancane futhi baba sezingeni eliphakeme phakathi kwamafektri ezembatho zaseVietnam. Emikhiqizweni yabo kubalwa izikibha, amahembe epolo, amabhulukwe ezemidlalo, namahembe anemikhono emide nemikhono emifushane.
IFashion Garment Ltd futhi ingomunye wabaphakeli abahamba phambili bezingubo nezembatho eVietnam. Banabasebenzi abalinganiselwa ku-8,400 nezindawo ezine zokukhiqiza. I-FGL yasungulwa ngonyaka we-1994 futhi isesifundazweni saseDongnar. Iphethwe yiHirdaramani Group eSri Lanka. IHirdaramani nayo inezinkampani eziningi eSri Lanka, e-United States naseBangladesh. Banamakhasimende amaningi aphesheya afana noHurley, uLevi's, uHush Hush noJordani. Imikhiqizo yabo ifaka amahembe entamo abasebenzi kanye namahembe e-polo, ama-hoodies nama-pullover, amajakhethi, amahembe alukiwe, izingubo zezingane nezabantu abadala, nokugqoka kwezingane okungajwayelekile.
Leli lizwe elincane eningizimu yeChina liyaqhubeka nokukhula emakethe yezokukhiqiza futhi kancane kancane seliba ngomunye wabathengisi bezingubo nezembatho ezinkulu kunazo zonke emhlabeni. IVietnam ibhekwa njengezwe elisathuthuka, kepha ingakhiqiza izingubo ezisezingeni eliphakeme ngenkathi ihlinzeka ngezindleko eziphansi zokukhiqiza.
Imakethe yezingubo nezembatho zaseVietnam ifaka phakathi abakhiqizi abaningi abakhulu; amanye mancane futhi alungele umthengi, kanti amanye angamazwe aphesheya kakhulu. Eminye yemiklomelo yokuhlonipha ihlanganisa i-Quick Feat, i-United Sweethearts Garment, iVert Company ne-LTP Vietnam Co, Ltd.
Ubhadane lwe-COVID-19 lulethe izinselelo eziningi embonini. Imboni yaseVietnam yezingubo nezembatho ithembele kozakwethu abambalwa abakhulu. Ubhadane luphazamise ukuthengwa kwezinto futhi lwadala ukushoda kwezinto zokusetshenziswa.
Isidingo ezimakethe zase-US nase-Europe naso sehlile. Ama-oda enqwaba akhanseliwe, okuholele ekudilisweni kwabasebenzi, kwancishiswa izimali, kanye nenzuzo ephansi.
Ubhadane lwenze imboni yaseVietnam yezingubo nezembatho yaba yindawo efanelekile esikhundleni seChina. Ngenxa yalokhu, iVietnam kungekudala ingahlala endaweni yesibili ezimbonini zokukhiqiza nezokuthekelisa.
Ephendula, uhulumeni waphendula ngokushesha. Yize isimo sinzima, imboni iyaqhubeka nokukhula. Iyaqhubeka nokukhombisa ithemba kuzo zonke izinhlaka ezithintekayo ngemuva kwalolu bhubhane.
Isikole Esihlonishwayo Kuzwelonke Sokuqoshwa Komculo, Ukukhiqizwa Kwomsindo, kanye Nobunjiniyela Bomsindo (Ukuhlelwa kweProNewsReport): - ENorwalk, eConnecticut Agasti 17, 2021 (Issuewire.com) -Sivulekile manje
Umculi waseBrithani onethalente uChris Browne Browne Project udale i-soundscape enesigqi sokuqala nesiluthayo nemifanekiso enengqondo. (Umbiko Wezindaba Zobuchwepheshe
Isikhathi Iposi: Sep-09-2021